Iincwadi Zokusungula Kwabatsha abasebenza kwiTaoist
Ukuvusa kwiTao kunye neNfihlakalo ye-Golden Flower , kuba mna, iincwadi ezaqalisa ukusebenzisana nomsebenzi weTaoist. Ndandithanda imbongo, imfihlelo, kunye nobulumko obunzulu obuvela kumaphepha abo! Zonke iicatshulwa ezisi-9 ezisezantsi zifanelekile umntu omtsha umthombo weTooism, kwaye uninzi luhlobo "olungapheliyo" olubangela ukuba lube luxabisekileyo nakwabasebenzi beTao. Ukuba uyayazi enye incwadi yokuqala yeTaosi engekho kuloluhlu - into eye yaphefumlela, mhlawumbi - nceda ukhululeke ukuyifaka, usebenzisa ikhonkco le "Reader's Response" ngasezantsi kwephepha.
Ukuvula Isango leNyoka: Ukwenziwa kweeNdawo zeTaoist zanamuhla ezenziwa nguKen Kaiguo & Zheng Shunchao (eziguqulelwe nguTomas Cleary) zithetha ibali lobomi likaWang Liping, umgcini wezahlulo-18 zesizukulwana seSango leNyoka yeSikolo soBugqibeleleyo yeTaoism, inikezela ngentsingiselo ekhangayo nekhuthazayo yomfundi waseTaoist oqhelekileyo. Uluhlu lwezahlulo zalo ezahlukeneyo - ngamnye umzekelo omnandi wokuthetha ngamabali - zichazwe ngokucacileyo kwiinkalo ezininzi ze-Taoist practice, ukusuka kwi-qigong ukuya ekucamngeni ukuya kwi-acupuncture kunye neyeza zonyango.
I-Loy Ching-Yuen Incwadi Yentliziyo: Ukwamkela iTao (eguqulelwe nguTrevor Carolan noBelen Chen) -fana neDaode Jing - eyakhiwe ngeendinyana ezimfutshane, ngasinye sicamngca malunga nomnye umgaqo weTaoist. Njengokuba:
Amandla enkrele apheli ngomsindo
kodwa kubuhle bayo obuhle:
Umangalisa we-chi kukuba, ngaphakathi ngaphakathi,
ihamba ngokugqithisa njengophawu lwegolide
ukuqinisa umoya wethu
Ndiyayithanda le ncwadi encinane, kwaye ngokuqhelekileyo iya kuvula kwikhasi elingenangqondo, ukukhuthazwa, ukukhokelwa kunye nokuzonwabisa.
IYoga ye- Taoist Yoga & Amandla Ezesondo iyincwadi efanelekileyo ebhaliweyo kwaye ifumaneka kwi-Inner Alchemy. Ibonakala njengoluhlu lwezifundo, ngasinye sibandakanya umkhwa othile wokuhlakulela i-jing (amandla okudala), qi (amandla okuphila ngobomi) kunye no-Shen (amandla okomoya). Le ncwadi ifanelekile kubaqalayo kwi-Inner Alchemy / Taoist Yoga, kunye neentlobo eziphambili. Imifanekiso ebonakalayo, ngokucacileyo, ngokunyathelo-nge-nyathelo ezichaziweyo zenkqubo.
Ibhunga likaKristupher Schipper leTooist yiyona nto ibonakalisa umdla weTaoist - kunye neengcambu zayo kwiinkcubeko zakwaShayamani zaseTshayina zasendulo - ngokubhekiselele kwimizimba yabantu, i-geological and body "eyenziwa ngesiTooist. USchipper ngokwakhe wamiselwa njengombingeleli waseTaoist, owamnika ingcamango yakhe-nangona le ncwadi ininzi i-scholarly ithoni yayo. Isingeniso esicacileyo nenyanileyo kwi-Taoist nembali.
Ukuvusa kwiTao ikwahlula ibe ngamafutshane (1-2 kwephepha), ngasinye sibonisa indlela uTaoist ofanelekileyo ngayo uLi I-Ming isebenzisa iimeko zobomi bemihla ngemihla ukuhlakulela ingqondo yeTao. Njengokuba:
Xa igumbi liphukile, lilungise kwaye ungayisebenzisa ukupheka njengangaphambili. Xa i-jar evuza, yilungise kwaye ungayisebenzisa ukugcina amanzi njengaphambili. Into endiyiqondayo njengoko ndiyayibona le Tao yokubuyisela into eyonakalisiwe ...
Ulwimi lulula; i-vignettes eyonwabileyo; kunye nethuba lokujonga ihlabathi ngamehlo enkosi yaseTaoist isipho esixabisekileyo, ngokwenene. Kunconywa kakhulu.
Imfihlelo ye-Golden Flower yinkqubo yokucamngca yaseTao yakudala, eyabhalwa yiTaoist eLu Dongbin. Inguqulelo yesiNgesi endiyincomayo nguThomas Cleary, obhala, kwisingeniso sakhe:
Igolide imela ukukhanya, ukukhanya kwengqondo ngokwayo; intyatyambo ibonisa ukuhluma, okanye ukuvula, ukukhanya kwengqondo. Ngaloo ndlela ibinzana libonakalisa ukuvuswa okusemgangathweni koqobo kunye nobungqina obufihlakeleyo.
Isicatshulwa siboniswe kwinqaku leengcaciso ezifutshane, ezibhaliweyo. Kwinqanaba "lakhe lokubhala", uMnu. Cleary unikeza inkcazelo ekhanyayo kwiindinyana. Nabani na onomdla kwi-Taoist meditation practice, le ngqungquthela encinci i-treasure trove!
U-Livia Kohn ungomnye waziwa kakhulu ngabaphengululi baseTaoist, kwaye i -Taoist Experience yi-anthology yakhe ebalulekileyo yeetekisi zeTaoist. Izinguqulelo ezingamashumi amathandathu ezingaguqukiyo eziqokelelwe kule ngqokelela zibonelela ngolu hlobo lweengcamango eziphambili zeTaoism, iinkqubo kunye nemikhuba; kunye nezikolo ezahlukahlukeneyo kunye nemigangatho. Izalathiso kwisahluko ngasinye zibonelela imeko yomlando. Ndicinga ukuba le tekisi isetyenziswe ezininzi kwiikholeji "uphando lweenkolo" izifundo. Kubandakanya ukukhutshwa okubanzi kwezinto ezingaphakathi kwi-Inner Alchemical kunye neengcamango zesimo seTaoist.
T'ai Chi Ch'uan & Ukucamngca nguDa Liu kukuhlolisiswa kakuhle kobudlelwane phakathi kobuchule beT Taiji kunye nokucamngca kokuhlala - kwaye, ngokubanzi, ubudlelwane phakathi kwanaluphi na uhlobo lokuhamba kunye nokungahambi (ukuma / ukuhlala) kweTaoist ku sebenza. Kwakhona zibandakanya iingxoxo zamaTayiti kwiinkalo zobomi bemihla ngemihla - ngoxa zihleli, zimi, zihamba kwaye zilele-kunye nesahluko ekuhlanganiseni, ukuguqulwa, kunye nokusasazwa kwamandla ngokwesini.
UDavid Liu wenza umsebenzi omkhulu wokudibanisa imbali, imfundiso kunye nokuziqhelanisa. Imiyalelo yakhe icacile, kwaye ingcaciso-kodwa kulula ukuyifumana. Kubonakala ukuba abantu abaninzi bengazi malunga nale ncwadi - nangona ndiyicinga into encane!
Ukuhlakulela ukunyanyeka yi-Inner Alchemy manual-eyabelwe kwisiganeko esiyingqungquthela uLaozi - oko kukuthi, kubafundi abaninzi baseTao (kuquka u-Eva Wong), owokuqala ukuba abekwe ukufundisisa. Isicatshulwa ngokwaso, kunye nesingeniso esiphezulu sikaNksz Wong, sinika isiseko se-taoist cosmology (kuquka i-Ching), i-Inner Alchemy kunye neendlela zokucamngca. Imifanekiso enobuncwane, eneenkcazo ezichazayo isichazi-ntetho.
Kwabo abanomdla wokulima emzimbeni nasengqondweni - kwinguqu ye-alchemical yokwenza kwethu ngokomzimba kunye nokwenzululwazi-le ncwadi yindawo ephambili yokuqala. Kunconywa kakhulu.
Yithi Ilungile ngeSpanish
Kutheni amaPainters kufanele afunde ukudweba
5 Izimpawu Ukuba Unokuzicamngca Kakhulu
Ukushintshaniswa kwemali kwiCasinos yaseCanada
Iimpi zeNapoleonic: iMfazwe yaseTalavera